Ny lalao 16 arcade tsara indrindra ho an'ny Android, manana azy rehetra ve ianao? | Androidsis
Jose Alfocea | | Lalao Android
The term Arcade Teny miely be sy malaza eo amin'ny sehatry ny lalao video io. Raha lazaina amin'ny fomba hentitra dia manondro an'io milina lalao video izay fahitanay tany amin'ny toerana be olona toy ny bar, fivarotana kafe, foibe fiantsenana ary arcade. Nanjary nalaza be izy ireo nandritra ny valopolo taona sy ny ankamaroan'ny sivifolo, indrindra noho ny tsy filokana na filokana dia tsy nanana fameperana ara-dalàna be loatra izy ireo.
Na izany aza, rehefa mandeha ny fotoana, ny teny Arcade nivoatra ary ampiasaintsika hiresaka azy io izao lalao video mahazatraLalao video an'ny style Retro izay mampatsiahy antsika an'ireo masinina noresahintsika teo aloha ireo. Matetika izy ireo lalao somary mora hilalaoRaha ny momba ny mekanika dia tsy ilaina matetika ny sary na teknolojia avo lenta. Ho fanampin'izany, manana laza malaza izy ireo, ary tsy eo amin'ireo mpilalao tranainy ihany, fa koa amin'ireo mpilalao rehetra mahita zavatra hafa amin'ny karazana lalao izay tsy fantany tamin'izany fotoana izany. Ary raha ny lohahevitrao dia hahita lalao arcade ianao amin'ny karazany maro karazanaManomboka amin'ny sehatra, mpitifitra na hazakazaka, hatramin'ny ady, hetsika, fanatanjahan-tena na traikefa nahafinaritra. Ary ankehitriny, tsy mila adim-potoana intsony, dia manolotra anao a fifantenana miaraka amin'ireo lalao arcade tsara indrindra ho an'ny Android. Ankafizo ary mifalia!
3 Lalao YooB
4 Tontolo Super Jungle
9 Noana Shark Evolution
10 World's 3
11 Piano taila 2
13 Famaranana farany IV
Ao amin'ny «Fernanfloo» dia hoheverinao ny mombamomba an'io toetra manintona io miatrika tafiky ny biby iray manontolo izay manakana anao tsy hifandray amin'ireo mpankafy anao. Mamoha akanjo vaovao ho an'ny Fernanfloo ary mandroso ambaratonga manaraka ny fanampian'ny herinaratra, lalao mahafinaritra sy mampiala voly tokoa izay manome mekanika tsotra ihany koa fa tsy mora foana.
Developer: BroadbandTV Corp.
"Temple Run" dia traikefa nahafinaritra mampientanentana izay tsy maintsy hitetezanao ny karazana sakana rehetra, hitsambikina hantsana ary maro hafa eo am-panangonana vola madinika sy hery manangona. Mamariparitra izany ny mpampiasa tena manaitaitra sy mampiankin-doha, ary tsy misy iota anton-kevitra izy ireo.
Araka ny azo tsoahina avy amin'ny lohateny hoe, "YooB Games" dia tsy lalao fotsiny fa feno sehatra izay mampiditra lalao mihoatra ny valopolo tsy mitovy amin'ny karazana fomba, lohahevitra ary sokajy maro be tokoa manomboka amin'ny lalao mpihazakazaka tsy misy fiafarana na ny fomba Tetris, hatramin'ny lalao ady sy ady, hazakazaka ary mpandeha noana indraindray.
Tontolo Super Jungle
Ny lalao sy ilay maherifon'ny "Super Jungle World" dia hampahatsiahy anao ny tena Super Mario Bross. Momba ny a Lalao hazakazaka tsy manam-petra izay tsy maintsy mitsambikina ary na dia mitifitra afo aza ianao mba hialana amin'ireo sakana am-polony ary esory ny fahavalo amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso ahafahana manao izany.
"Super Jungle World" dia manana sary mahatsikaiky, maro loko ary maro loko, ary maro hafa noho ny Haavo 199, Ka ny fahafinaretana dia azo antoka mandritra ny lalao maro.
«Geometry Dash Lite» dia a platformer mahazatra feno fihetsika sy haingam-pandeha. Ny tarehimarika jeometrika no mpiorina an'ity lalao ity izay tsy maintsy hizahanao toetra ny fahaizanao "mamaky làlana mampidi-doza sy sakana maranitra", na amin'ny fitsambikinana, fikorisana, fanaovana pirouette tsy azo atao eny amin'ny habakabaka ary na ny famadihana ny lalàn'i hery misintona.
Developer: Lalao RobTop
Lalao iray hafa aingam-panahy avy amin'i Super Mario Bross dia ny "Super Andrio 2", lalao iray izay ahalalàn'ny mpilalao fototra azy, Andrio, ny hanavotra ilay andriambavy nalain'ny biby goavambe. Tsy maintsy manao an'izany ianao mihazakazaha, mitsambikina, mikorisa amin'ny sehatra maro, misoroka sakana an-taonina ary mandresy ambaratonga sarotra am-polony. Tsy isalasalana fa lalao mahafinaritra hafa sy mampiankin-doha iray hafa izay hahafahanao hanana fahafinaretana taonina. Ary mazava ho azy, aza adino ny misambotra ireo zavatra rehetra azo ampiasaina amin'izany, satria amin'izay ianao vao mahazo teboka azonao atakalo fiainana.
Tao amin'ny "Tsunami Zombie" onja tsy maty no nanafika sy nandrava ny tanàna, nandevona ny olombelona velona rehetra teny aminy. Mihevitra ve ianao fa ny hahatafita velona amin'ireo zombies no tanjonao? Tsy misy an'izany, tsy maintsy mitantana hisambotra olombelona ianao. Arakaraka ny maha-olona anao no misambotra anao, arakaraka ny habetsaky ny vola ho azonao ahazoana herinaratra izay manampy anao manimba izay rehetra hitanao amin'ny lalanao.
Ao amin'ny «Subway Surfers» dia horaisinao ny maha-skateboarder anao, raha tsy matihanina, saika izay amin'ny skateboard-ny no tsy maintsy afa-mandositra ny inspektera polisy sy ny alikany. Mba hanaovana izany dia tsy maintsy manaraka ny lalan'ny fiaran-dalamby ianao, saingy mazava ho azy, tsy mora ho an'ny fiaran-dalamby izany, ka tsy maintsy hialanao izy ireo rehefa manangona farantsakely betsaka araka izay azo atao mba hampitomboana ny herinao sy ny hafainganam-pandehananao amin'ny alàlan'ny fanaovana stunt tsy azo atao.
Developer: Lalao SYBO
Noana Shark Evolution
Ao amin'ny "Hungry Shark Evolution" dia azonao atao ny maka sary an-tsaina hoe iza no tena mpilalao fototra, antsantsa tena noana be. Lalao rano feno hetaheta sy misy akony ity toerana misy anao ity handray ny vavan'ny antsantsa noana ianao izay mandany ny zava-drehetra alehany; Mitadiava tontolo vaovao sy zavaboary vaovao eo amin'ny fanambanin'ny ranomasina, mitadiava harena vaovao, manangàna antsantsa kely ho tafikao, fanamby ny namanao ary maro hafa. Ah! Ary azonao atao koa ny manamboatra ny antsantsa.
«Lep's World 3» dia malaza platformer sy lalao hazakazaka kintana Lep, Irlandey sariaka sy mahatsikaiky izay tanàna tsara tarehy sy mirindra no hanafika tampoka ireo troll ratsy fanahy izay mandray ny haren'ireny goblin ireny ary maka an-keriny azy rehetra. Eny, ny olon-drehetra afa-tsy i Lep.
Lep ankehitriny ianao, ary ny iraka ataonao dia avoty ny mpiray tanindrazana rehetra amin'ny alàlan'ny fihazakazahana, fitsambikinana ary fivezivezena amin'ny ambaratonga 120 ny sarotra ary tontolo dimy mahatalanjona. Tsy maintsy mandresy fahavalo dimy lehibe koa ianao ary manangona tanjona hahafahanao mahazo fahaiza-manao izay hanampy anao amin'ny iraka ataonao.
Piano taila 2
"Piano Tiles 2" dia lalao tsotra indrindra, fa tsy mora. Miaraka amin'ny ho afaka hitendry hira am-polony amin'ny fomba maro sy isan-karazany amin'ny piano ianao, fa tsy maintsy mifantoka foana ary tsy hahomby amin'ny fotoana rehetra. Ho fanampin'izany, ho afaka hifaninana amin'ireo mpilalao hafa ianao na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao ary "ho lasa andevozin'ny fiankinan-doha" amin'ny fiakarana toerana amin'ny laharana manerantany.
Developer: Lalao Cheetah
"Flippy Knife" dia lalao manaraka ny dian'ny be mpitia sy mampiady hevitra Flappy Bird na dia amin'ity indray mitoraka ity dia momba manipy antsy mba hianjera amin'ny làlana marina. Araka ny azonao an-tsaina, ny lalao dia tsy tsotra toy izany satria efa fomba lalao isan-karazanyManomboka amin'ny fiakarana rindrina mitazona antsy amin'ny fomba maro hanipazana antsy, ao anatin'izany ny maodely arcade izay hahatafiditra ny haavon'ny fahasahiranana samihafa. Hametaka ny antsy araka ny tokony ho izy ve ianao sa hanipy azy amin'ny fomba mety hahavoa azy amin'izay tsy tokony sy hianjera? Andramo ny teknikao sy ny fahaizanao mahatratra ny tanjaka sy ny fironana marina. Ah! Ary tsy misy antsy ihany, fa misy sabatra, famaky sns fitaovam-piadiana mihoatra ny telopolo hafa fa maranitra be daholo.
Developer: Lalao Beresnev
Famaranana farany IV
Amin'ny safidin'ireo lalao arcade na Retro tsara indrindra dia tsy azonao atao ny tsy mahita ny "Final Fantasy IV", iray amin'ireo malaza indrindra Lalao RPG (Role Playing Game) noforonin'i Nintendo. Ny lohateny fahefatra an'ny saga dia nanamarika teboka iray mahatratra ny haavon'ny laza ho an'ny voalohany izay mampiditra ny Rafitra Ady Fotoana miasa (ATB) ary rafitra iray ahafahanao mamindra hery sy fahaiza-manao amin'ireo mpilalao hafa hanampy azy ireo amin'ny ady.
Miorina amin'ny kinova ho an'ny Nintendo DS izay navoaka tamin'ny taona 2008, "Final Fantasy IV" ho an'ny fiasa Android fitaovana Sary 3D, asa fandikan-teny mahafinaritra sy ora sy traikefa nahafinaritra.
Developer: SQUARE ENIX Co, Ltd.
Efa imbetsaka izahay no nilaza an'i Mario Bross, saingy izao no fotoana hitanisa ny "Super Mario Run" ho iray amin'ireo lalao arcade tsara indrindra ho an'ny fitaovana Android. Natomboka latsaky ny herintaona lasa izay, mitazona ny votoatin'ny lalao kilasika fa nangalatra ora maro tamintsika mbola kely izy. ny lalao mpihazakazaka tsy misy farany miseho manerana izao tontolo izao sy haavo maro, afaka milalao amin'ny rantsan-tànana iray fotsiny ianao, ary izany dia hiteraka fiankinan-doha tsy mbola niainanao hatrizay.
Olona kilasika iray hafa eo amin'ny tontolon'ny lalao video dia ny hedgehog Sonic manga, izay fahombiazana lehibe nitaingina azy ho toy ny sarin'ilay orinasa teraka, Sega. Ao amin'ny Play Store dia manana lohateny maromaro ianao miaraka amin'i Sonic, saingy eto izahay dia mitanisa ny "Sonic Dash", a adventure hofehezinao ity hedgehog ity ary hihazakazaka amin'ny hafainganam-pandeha farany ianao amin'ny alàlan'ny habaka 3D hisorohana ireo sakana marobe, isan-karazany ary sarotra. Raha mampanantena fahafinaretana mandritra ny ora maro ny "Super Mario Run" dia tsy lavitra eo aoriana i "Sonic Dash".
Sonic Dash - Lalao mihazakazaka
Saika sary famantarana ny valopolo taona ary ampahany amin'ny sivifolo. "Pac-Man" angamba ny lalao arcade malaza indrindra sy malaza indrindra tamin'io fotoana io. Mandehandeha mamaky labirinina rehefa mandany baolina angovo, manalefaka matoatoa mba hahafahanao mihinana azy ireo alohan'ny hamerenany ny heriny. Mihinana, mihinana ary mihinana ary manangona teboka hahavitana. Tsotra ny filalaovana, saingy sarotra ny mandresy azy, PAC-MAN dia lalao mampiankin-doha mampientam-po tokoa ary handany ora maro amin'ny fatorianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Lalao Arcade
Unboxing sy ny fahatsapana voalohany an'ny Oukitel K10000 MAX
Ho tonga ny Huawei Mate 10 miaraka amin'ny bateria 4000 mAh lehibe